Madaxweye Farmaajo ayaa soo xiray ololaha Xoogaga wadaniyiinta Gobolka Banaadir | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Madaxweye Farmaajo ayaa soo xiray ololaha Xoogaga wadaniyiinta Gobolka Banaadir
Madaxweye Farmaajo ayaa soo xiray ololaha Xoogaga wadaniyiinta Gobolka Banaadir
Muqdisho (SNTV)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo xiray ololaha Xoogaga wadaniyiinta Gobolka Banaadir kuwaas oo ka qeyb qaadanayo barnaamijyada wacyi-galinta iyo xasilinta Caasimadda.
Kusimaha Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna guddoomiye kuxigeenka Maamulka iyo Maaliyadda gobolka Banaadir mudane Xuseen Maxamed Nuur, taliya-yaasha ciidamada qalabka sida iyo maamullada degmooyinka ayaa goob joog ka ahaa munaasabadda.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa sheegay in xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed ay aas-aas u yihiin horumarinta amniga Caasimadda.
Kusimaha Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna guddoomiye kuxigeenka Maamulka iyo Maaliyadda gobolka Banaadir mudane Xuseen Maxamed Nuur oo munaasabadda ka hadlay waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku guuleestay hir-gelinta barnaamijka dariseynta oo guula muhiim ah laga gaaray, waxa uu sidoo kale sheegay in uu meel gaba- gaba ah mareyso qorshaha horumarinta Caasimadda ee 5-sano soo socoto ee ka kooban 6-Tiir.
Ugu dambeyn kusimaha duqa magaalada Muqdisho ayaa ka dhawaajiyay in xuquuq ay heli doonan howl-wadeenada xoogaga wadaniyiinta gobolka Banaadir.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ( Farmaajo) ayaa uga mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir doorka uu ka geestay in ololahani lagu guulesto islamarkaana uu soo gaaro heerkan.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladu ay dhiira-galin doonto qorsha kaste oo lagu xoojinayo qaranimada iyo horumarinta wadajirka umadda Soomaaliyeed si looga guulesto sharwadayaasha.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre oo qaabilay wafdi ka qeyb galay shirka Waxbarashada sare ee Dalka
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo dalacsiiyey Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed